इटलीमा यस्तो अवस्था आउला भन्ने जनताले सोचेका पनि थिएनन्
सञ्जीव भट्ट बिहीबार, चैत १३, २०७६, २२:५९
संक्रमित हुने र मृतकको संख्या बढिरहेको छ। स्थिति अत्यन्त नाजुक छ। स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भइसकेको छ। इटलीमा २१ फेब्रुअरीमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यहीँबाट सुरु भएको ‍यो भाइरसको संक्रमण विस्तार हुँदै बढ्दै गयो। दिनदिनै संक्रमित र मर्नेहरूको संख्या बढ्दै गयो।
सरकारले यहाँ लकडाउन त गर्‍यो तर लकडाउन मात्र प्रर्याप्त भएन। इटालीले प्रर्याप्त तयारी गर्न सकेन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यहाँका जनताले पनि त्यसअनुरुप लिन नसकेको पनि आरोप छ। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेका बेला इटलीमा भने फाटफुट मात्र थियो।
आज यस्तो अवस्था आउला भनेर कसैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन। इटालीबाट अरु देशले सिक्न पाए तर इटालीले त्यो अवसर पाएन। शायद अरु देशको सिक्न पाएको भए पक्कै फरक पर्ने थियो होला। बेलैमा तयारी गर्न नपाउँदाको असर हो यो। के हो? कस्तो हो? भन्ने भेउ नै नपाउँदै संक्रमण फैलियो। महामारी बन्यो। यहाँ हालसम्म ७ हजार ५ सय ३ जनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्।
यहाँको समाचार हामीले फलो गरिरहेका छौं। यहाँबाट नेपालमा समाचार अनुवाद हुँदा धेरै गल्ती भएको छ। यसले भ्रम र त्रासदी पुगेको महसुस भएको छ। 'इटलीको प्रधानमन्त्रीले सरेन्डर गरे', 'हात उठाए' भन्ने हल्ला नेपाल पुगेको पाएँ। यहाँको समाचारमा त्यस्तो मैले पाएको छैन। कहीँ कतै यस्तो सुन्न पाइएको छैन।
अवस्था कस्तो हो भने लकडाउनपछि जारी संकटमा कमी आउला भन्ने आश थियो त्यो नभएको भने पक्कै हो। ‘हामीले यत्रो प्रयास गर्दा सकिरहेका छैनौं,’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेका हुन्। उनले ‘हामी युद्ध जित्ने छौं’ समेत भनेका छन्। उनले आफ्नो सबै भनाइ आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। त्यसमा उनले कोरोना भाइरसविरुद्धको युद्ध जित्ने सन्देश दिएका छन्। जनताहरूले पनि उनको सर्मथन गरेर युद्ध जित्नुपर्ने भन्दै हौसला दिइरहेका छन्। धेरैजसो सम्बोधन उनले सकारात्मक उर्जा दिने खालको छ। अलि दुःखको अवस्था भनेको जति दुःख गर्दा पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नआउँदा निराशा भने पक्कै छाएको छ।
केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरेहको एक भिडियोको बारेमा म केही प्रष्ट पार्दैछु। यहाँका एक अभिनेताको भिडियो नेपालमा पनि भाइरल भइरहेको रहेछ। मैले पनि त्यो भिडियो हेरेको छु। उनी बस्ने क्षेत्रका नेपालीलाई मैले यसबारेका जानकारी लिन सोधें पनि। यहाँको इसाई धर्म क्याथोलिक विधिअनुसार कम्युनमा अन्तिम संस्कार गर्न स्थानको अभाव छ। कतिपय अन्तिम संस्कार गर्ने स्थानमा दिनको २५ वटामात्र गर्न सकिन्छ। यो विधिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न एक सातासम्म पर्खिनुपर्ने पनि हुन सक्छ। उनको प्रकरणमा पनि आफ्नो परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न समय लागेको हुनसक्ने देखिन्छ। यहाँ दैनिक ६ सयदेखि ७ सयसम्मको संख्यामा मृत्यु हुँदा सेनाले अर्को राज्यमा लगेर पनि अन्तिम संस्कार गराइरहेको छ। सेनाले स्कटिङ गरेर पनि अन्तिम संस्कार गरेको हामीले पाएका छौं। बहिनीको लास बेडमा हुँदा उनले करुणा व्यक्त गर्नु मानवीय स्वभाव हो।
अर्को यहाँको डरलाग्दो स्थिति के हो भने यहाँ कुल संक्रमितमध्ये ९ प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित नर्स, डाक्टर र मेडिकल स्टाफ छन्। ६ हजार २ सय ५ मेडिकल स्टाफ नै संक्रमित छन्। ३६ जनाको ज्यान गएको छ। किट अभाव हुनु, औषधी नहुनु र दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित थपिनु पक्कै सहज अवस्था हुँदै होइन। उपचार गर्न बिरामी जाने अस्पतालकै स्टाफ यसरी संक्रमित हुनु आफैंमा डरलाग्दो कुरा हो। यहाँ बसेर नेपालको अवस्था सोच्दा अहिलेसम्म त संक्रमितको संख्या देखिएको छैन र नदेखियोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। यो समस्या सानो होला, कसैलाइ यस्तो लाग्ला तर यो पक्कै सानो छैन। सरकारले लकडाउन गरेको छ। त्यसलाई पालना गरेर घरमै बसौं। होसियार हौं र समयमै सचेत हौं।
इटालीको अवस्था हेर्दा यो संक्रमण वृद्ध व्यक्तिमा मात्र लाग्छ भन्ने सोच्नु मूर्खताभन्दा अरु केही पनि होइन। संक्रमितमध्ये जेष्ठ नागरिक तुलनात्मक रुपमा धेरै छन् तर युवायुवतीले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन्। ४८ वर्षकी सुपर मार्केटमा काम गर्ने महिलाले ज्यान गुमाएकी छन् भने ४७ वर्षका एक प्रहरी सेवामा रहेका युवाले पनि कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। ३४ वर्षका युवाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। उनको कुनै स्वास्थ्य समस्या थिएन। यहाँ चर्चित फुटबलर डि वाला पनि संक्रमित छन्। उनी २६ वर्षका मात्र हुन्। उनी अर्जेटिनाबाट खेल्ने गर्थे। यसरी हेर्दा संक्रमण जसलाई पनि हुन सक्छ।
समयमा उपचार पाए भने ठिक होला तर औषधी, उपचार सामाग्री, डाक्टर र अस्पताल अभाव भएका देशमा के होला? सामान्य अवस्थामा पनि ज्यान जाने हुन सक्छ। लकडाउनलाई पालना गरौं। हामी तीन हप्तादेखि लकडाउनमा छौं। खाना अभाव भए किनेर ल्याउछौं। स्यानिटाइजर प्रयोग गर्छौं। हात धुन्छौं।
यहाँका नागरिकले पनि सुरुमा लकडाउनको अवज्ञा गरेका थिए किनकि उनीहरूले यो अवस्था आइपुग्ला भन्ने सोचेकासम्म पनि थिएनन्। अहिले यहाँका नागरिकले लकडाउनको राम्रोसँग पालना गरिरहेका छन्। घर नजिकै डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु छन्। केही काम परेर जानैपर्ने अत्यावश्यक अवस्था भएमा प्रहरीले कागजात हेरेर अनुमति दिइरहेको छ। नेपालमा यस्तो अवस्था नआओस् मेरो यहाँबाट कामना छ। नेपालमा अहिलेकै अवस्थामा नियन्त्रण होस् भन्ने कामना छ। सुरक्षित रहनुहोला होसियार हुनुहोला। लकडाउनलाई पालना गर्नुस्। तपाईं घरमै बस्नुभयो भने र अरुबाट सर्नेछैन। जानै परेमा दूरी कायम गर्नुहोला। हामीले यहाँ यही गरिरहेका छौं। म फेरि पनि भन्छु, लकडाउन पालना गर्नुस्। सुरक्षित रहनुस्।